Git Sangit News » दशैमा ब’न्दलाई लिएर मन्त्रालयले भर्खरै जारी गर्यो यस्तो सुचना ! कार्तिक १ देखि यस्तो हुने,
दशैमा ब’न्दलाई लिएर मन्त्रालयले भर्खरै जारी गर्यो यस्तो सुचना ! कार्तिक १ देखि यस्तो हुने,
काठमाडौं । देशमा को’रोना सं’क्रमण तिब्ररुपमा फैलिएसँगै सरकारले घ’टस्थापनाको दिनदेखि पूर्णिमासम्म सरकारी कार्यालयहरु ब’न्द गर्ने तयारी गरेको छ । को’भिड १९ म’हामा’री व्यवस्थापन केन्द्र (सीसीएमसी)को बैठकले घटनास्थापनाको दिनदेखि सरकारी कार्यालय ब’न्द गरिनुपर्नेमा जोड दिइएको स्रोतले बताएको छ ।
पछिल्ला दिनहरुमा सरकारी कर्मचारी तथा सुरक्षाकर्मीहरु सं’क्रमित हुने क्रम बढेको भन्दै दशैंमा कर्मचारीहरुबाट झन को’रोना फैलिने जोखिम रहेको भन्दै अत्यावश्यक सेवाबाहेक सबै सेवा घटस्थापनाका दिनदेखि पूर्णिमाका दिनसम्म ब’न्द गर्ने गरी रण’नीति बनाउन सरकारलाई सिफारिस गर्ने तयारी भएको हो ।
स्रोतका अनुसार आइतबार सीसीएमसीको बैठक बसेर को’रोना नि’यन्त्रणको मोडलबारे सरकारलाई सिफारिस गरिने र आगामी सोमबार बस्ने मन्त्रिपरिषदबाट पारित गाराउने तयारी छ । सीसीएमसीको शनिबारको बैठकमा काठमाडौं उपत्यकालगायत देशमा को’रोना सं’क्रमण तिब्र रुपमा बढ्नुको कारणबारे नेपाली सेनाले आफ्नो प्रस्तुति दिएको थियो । सेनाले लक’डाउन खुकुलो र लकडाउन अ’न्त्यको राम्रो व्यवस्थापन हुन न’सक्दा को’रोना तिब्ररुपमा फैलिएको निष्कर्ष निकालेको जनाइएको छ।
प्रकाशित मिति २९ आश्विन २०७७, बिहीबार १७:१६